Windows နှင့် OS X တွင်အလုပ်လုပ်ရန် exFAT disk များကိုမည်သို့ format ရမည်နည်း ငါက Mac ပါ
Windows နှင့် OS X တွင်အလုပ်လုပ်ရန် exFAT disk များကိုမည်သို့ပုံစံချရမည်နည်း
Louis padilla | | OS X ကိုအယ်လ် Capitan, လဲ tutorial
Mac နှင့် Windows ပေါ်တွင်ပြင်ပ drive တစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အမှန်တကယ်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်လာနိုင်သည်။ NTFS (သို့) HFS + တွင်ပြင်ပ drive တခုကို format လုပ်မလားဆိုတာဆွေးနွေးမှုကကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Windows နှင့် OS X နှင့်လိုက်ဖက်တဲ့ ExFAT အသစ်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီး FAT4 ဖိုင်ကန့်သတ်ချက်နှုန်း 32GB မပါ ၀ င်သောကြောင့်သင်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ သို့သော်အံ့အားသင့်စရာတစ်ခုမှာ Mac အသစ်တစ်ခုမှ format တစ်ခုတွင် disk ကို format လုပ်ခြင်းသည် Windows တွင်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ၎င်းကိုအခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့်ဖြေရှင်းလျှင်၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။။ အဘယ်သူမျှမဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူပြProbleနာ? မနည်းပါ။ ဤလမ်းညွှန်အတိုင်းလိုက်နာပါကသင်၏ disks များကိုသင်၏ Mac ပေါ်တွင် exFAT အဖြစ် format ပြုလုပ်နိုင်ပြီး Windows တွင်မည်သည့်ပြproblemနာမှမရှိဘဲအသုံးပြုနိုင်သည်။
1 အကြောင်းရင်းမှာ GUID အခန်းကန့်မြေပုံဖြစ်သည်
2 El Capitan တွင်အဆင့်မြင့်သောရွေးချယ်မှုများကိုဖွင့်ခြင်း
အကြောင်းရင်းမှာ GUID အခန်းကန့်မြေပုံဖြစ်သည်
OSX Disk Utility မှ disk တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဖွဲ့စည်းသောအခါ GUID Partition Map ဖြင့်အမြဲတမ်းလုပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြစရာမလိုပါ။ ၀ င်းဒိုးမှာဒီလိုမျိုးအလုပ်မလုပ်ဘူးလို့သာပြောပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့် exFAT သည် Windows နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပုံစံဖြစ်သော်လည်းဤအခန်းကန့်မြေပုံကိုအသုံးပြုသောအခါ Microsoft စနစ်တွင် disk သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ အဲဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းသလဲ။ Disk ကို MBR Partition Map ဖြင့် format လုပ်ခြင်း။
ပြCapနာက El Capitan ကဒီရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်မပြုဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Yosemite သို့မဟုတ်ယခင်စနစ်အချို့ကိုအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်ရွေးစရာများကို အသုံးပြု၍ မည်သည့် Partition Map ကိုရွေးချယ်မည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့သော် El Capitan တွင်ထိုရွေးချယ်မှုသည်မည်သည့်နေရာ၌မျှမတွေ့ရပါ။ ဒီ Utility ကိုရိုးရှင်းစေခြင်းအားဖြင့် Apple က Advanced options တွေကိုဝှက်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဝှက်ထားတာဖြစ်လို့သူတို့ကိုပုံပေါ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်.
El Capitan တွင်အဆင့်မြင့်သောရွေးချယ်မှုများကိုဖွင့်ခြင်း
အဆင့်မြင့်ရွေးစရာများ Utility အသုံးချပရိုဂရမ်၏ပြသမှုကိုပြရန်သင်လုပ်ရန်မှာ -
Disk Utility အသုံးချပရိုဂရမ်ကိုလုံးဝပိတ်ပါ
(Applications> Utilities အတွင်း) "Terminal" application ကိုဖွင့်ပြီးအောက်ပါစာကြောင်းကို paste လုပ်ပါ။
defaults com.apple.DiskUtility အဆင့်မြင့်ပုံရိပ် -၁ ရွေးစရာများကိုရေးပါ
ယခုသင် "Disk Utility" application ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးသင် format လုပ်ချင်သောပြင်ပ disk ကိုရွေးနိုင်သည်။ ယခု Delete (Partition မဟုတ်) သွားပြီး "Master Boot Record (MBR)" ကိုရွေးပါ။။ Format ၏အဆုံးတွင်၊ သင်၏ disk သည် OS X နှင့် Windows ရှိမည်သည့်ကွန်ပျူတာတွင်မဆိုအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
သင်ကသံသယရှိပါက exFAT ပုံစံငါတို့နင့်ကိုထားခဲ့ခဲ့တဲ့ link ကိုသွားပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » Windows နှင့် OS X တွင်အလုပ်လုပ်ရန် exFAT disk များကိုမည်သို့ပုံစံချရမည်နည်း
အရမ်းအသုံးဝင်တယ်၊ ငါ Mac မှာလုပ်မယ်
ငါအတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ငါကအစီအစဉ် ၃ ခုအတူတူပဲ။ ငါ့မှာ Os x Capitan ရှိတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ နောက်ပုံစံတစ်မျိုးပေးပါ။ နောက်မှထို option ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
Moises garcia mgm ဟုသူကပြောသည်
Andrés Anzo ကြည့်ပါ ဦး
Moises Garcia Mgm ကိုစာပြန်ပါ
Irvin canche ဟုသူကပြောသည်
Irvin Canche သို့စာပြန်ပါ
SD Card ကို exFAT ဖြင့် OS Capitan ဖြင့် ဖျက်၍ MBR ပေါ်လာသည်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်မလိုအပ်ပါ။ အခြားသူများလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ဟယ်လို! ၎င်းကို usb မှတဆင့်ဆက်သွယ်ပါက၎င်းတို့သည် TV နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ရုပ်မြင်သံကြားစက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမယ်ဆိုရင်။ အခြေခံအားဖြင့်အားလုံးက exFAT, NTFS နဲ့ FAT32 format ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတယ်
ငါတခါတလေစမ်းကြည့်ဖူးတယ်၊ သူတို့က TV ပေါ်မှာဗွီဒီယိုကြည့်ဖို့သူတို့နဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့က Time Machine ကော်ပီလုပ်ဖို့အလုပ်လုပ်သလားလို့ငါမေးချင်သလား။
TimeMachine အတွက်အလိုအလျောက်ရွေးချယ်သောစနစ်ကိုရွေးလိုက်ခြင်းကပိုကောင်းသည်။ ထိုအဟုတ်, သူတို့ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာသူတို့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောခဲ့တာပါ။ ကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပြီ။ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။!!!! သငျသညျကငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်ဘယ်လောက်စိတ်ကူးရှိသည်မဟုတ် !!!
Terminal တွင် command ကိုရိုက်သော်လည်း mbr option သည်ပေါ်မလာပါ။ ငါအင်တာနက်ကိုရှာဖွေပြီး Apple ကိုဘာကောင်းကျိုးမှမဖြစ်စေခဲ့ဘူး။ Parrot မှာသူတို့ပေးမယ်လို့ငါမထင်ဘူးအဖြေတစ်ခုရှာနေတုန်းဒီဘလော့ဂ်ကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ၀ င်းဒိုးရှိသူတစ် ဦး ဦး အားမျက်နှာသာပေးရန်တောင်းဆိုခြင်းသည်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ။ !! သူကသူ
ဟယ်လို။ Delete / ExFAT / Master Boot Record (MBR) ကိုရွေးသောအခါကျွန်ုပ်မှားသွားသည်။ "ဖျက်သိမ်းခြင်းမအောင်မြင်" ဘာကြောင့်လဲ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Mireia Pozo မာယာ ဟုသူကပြောသည်
အလွန်အသုံးဝင်! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! ငါကနှင့်အတူအရူးသွားခဲ့သည်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Mireia Pozo Maya အားပြန်ပြောပါ
ဟယ်လို။ Delete / ExFAT / Master Boot Record (MBR) ကိုရွေးသောအခါကျွန်ုပ်မှားသွားသည်။ "Error delete" ဒီဘာကြောင့်လဲ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အခြားပုံစံဖြင့် format လုပ်ပြီးထို option ကိုအသုံးပြုလိုပါကသင်မြင်နိုင်လိမ့်မည်။
ExFAT နှင့် MBR boot များတွင် Samsung SSD 850 EVO ကို format ချခဲ့သည်။ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
ကျွန်ုပ်၌ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်းအတွက်သံသယဖြစ်ဖွယ်နှင့်ဆင်ခြေ ပေး၍ ကျွန်ုပ်တွင် TB TB ပြင်ပ DD နှင့် OS X El Capitan ရှိသည်။ MBR ရွေးစရာပေါ်လာသည်။ သို့သော် Format နေရာတွင်ဖိုင်များကိုဖတ်ရန် / ရေးရန် ExFat ကိုစစ်ဆေးရမည်။ Mac ကဲ့သို့သော Windows သည်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ငါ El Capitan မှ ExFat ကို format လုပ်ပြီး GUID အခန်းကန့်စနစ် (3TB hard disk နှင့် MBR၊ 2TB ထက်ပိုပြီးမပံ့ပိုးနိုင်သောကြောင့်) ကိုဆက်လက်ထားရှိပြီး Windows 10 64bits တွင်စမ်းသပ်ခြင်းသည်အလုပ်လုပ်ပုံရသည်။ ၀ င်းဒိုးသစ်မှာဒီဆောင်းပါးမှာဆွေးနွေးထားတဲ့ဒီသဟဇာတဖြစ်မှုပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပြီးပြီလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာအတူတူပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် Sierra နဲ့၊ အခန်းကန့်တစ်ခုလုပ်ရန်နှင့် ၀ င်းဒိုးများကိုတပ်ဆင်ရန် MBR ဖြင့် USB ကို format လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်၊ သို့သော် Disk Utilities တွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားရွေးချယ်စရာမပေးသော၊ Terminal တွင်၎င်းကျွန်ုပ်တို့အားပေးခဲ့သောဖြေရှင်းချက်ကိုရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်တော့်အတွက်အလုပ်မဖြစ်ဘူး၊
ဒီ operating system သစ်အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသင်သိပါသလား။ ထပ်ဆောင်းပြီးတော့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟယ်လို! ကျွန်တော့်မှာ 3TB hard drive ရှိပြီး ExFat32 system ပေါ်မှာ Master Boot Record (MBR) နဲ့ format မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကို GUID Partition Map နဲ့ထားခဲ့ရင်။
ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာပူးတွဲလိုက်တဲ့ command ကငါ့အတွက်သိပ်မကောင်းဘူး။
"defaults write com.apple.DiskUtility Advanced-image-options 1" သို့ "defaults write com.apple.DiskUtility Advanced-image-options 2" ကိုပြောင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။
ငါက TYPO ကြောင်းနားလည်ပါသည်။
hwctor ပါ ဟုသူကပြောသည်
ငါသည်သင်တို့ကို update လုပ်ချင်တယ်, ယနေ့အထိပုံစံများ၏ပြissueနာကိုဖြေရှင်းပြီးပါပြီ ... သင်ကသင်၏ USB ကို ExFAT နှင့် MAP of GUID partitions တွင် format လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ၄ င်းသည်4GB ထက်ကြီးသောဖိုင်ကိုပင်သင်ထည့်နိုင်သည်။
ဤ hwctor ထင်မြင်ချက်ကိုဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည် Mac ရှိ GUID အခန်းကန့်များ MAP နှင့် ExFAT တွင် WD Elements များကို format လုပ်နိုင်ပြီး၎င်းကို Pc တွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည် (ဆိုလိုသည်မှာ Mac နှင့် pc ပေါ်ရှိဖိုင်များထည့်ခြင်း၊ ဖယ်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်း၊ ဒေါင်းလုပ်ချခြင်း) ? - ကျွန်ုပ်တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသေးသည် - « Master Boot Record »နှင့်« GUID »။ နှစ်ခုလုံးအတူတူလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ယခုတွင်သင်သည် Apple ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ wallpapers အသစ် ၁၂ ခုကို download ပြုလုပ်နိုင်သည်
WWDC 2016 နေ့စွဲ၊ ၁၂ လက်မ MacBook အသစ်၊ OS X El Capitan ၏ beta အသစ်နှင့်အခြားများစွာရှိသည်။ SoydeMac တွင်တစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး